Indawo yokulala ye-unisex / Indawo yokulala exubeneyo
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe ongu御宿飯坂
Indlu yeeNdwendwe iOyado Iizaka yindlu yeendwendwe encinci esebenzisa izindlu eziqhelekileyo zabucala, ezalwe kumnqweno wokuhambisa "ubuhle" beDolophu yeIizaka ukuya eJapan nakwihlabathi.
Onke amagumbi ayi-tatami-matted kwaye akhululekile ukubamba, kwaye i-futons ayizizo iibhedi, kodwa i-cotton ekhululekile yaseJapan-style futons ezuzwe kwixesha le-Showa yokuqala. Ukongeza, unokukhetha umqamelo owuthandayo kwiintlobo ezi-3.
Kuvulelekile kuluntu, ngethemba lokuba abantu abakwindawo enye kwaye phantsi kophahla olufanayo banokusebenzisana kwaye bachithe ixesha elingazange libonwe ngaphambili.
Akukho nto ikhethekileyo, kodwa zive ukhululekile ukuza kusindwendwela njengendawo yokuphilisa kuhambo lwakho! !!
Sine "tatami mats" kunye ne "cotton futons" ezikunika imvakalelo yesiJapan "yaseJapan". Nceda ujabulele ivumba elihlaziyayo le-tatami mats kunye nentuthuzelo ye-futons.
* [Iizaka Onsen] Kukho iibhafu zasentlakohlaza ezishushu ezili-9 (iiyen ezingama-200 zabantu abadala), kwaye ezi-3 zingaphakathi kohambo lwemizuzu emi-3 ukusuka kwindawo yethu yokuhlala. Sivula ngentsimbi yesi-6 ukuya kweye-10 ebusuku, ngoko ke nceda wonwabele isiphethu esishushu osithandayo.
* [Iparadesi yeziqhamo] Unokunandipha icherry (ngoJuni), iipesika (Julayi-Septemba), amapere, iidiliya, iipersimmons, nama-apile unyaka wonke.
* [Hot spring heaven] Zininzi iindawo ezishushu zentwasahlobo phakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwengama-60 ngemoto, kwaye ungakonwabela ukutyelela imithombo eshushu efana neTakayu eshushu, Thatha intwasahlobo eshushu, iTsuchiyu eshushu, kunye nentwasahlobo eshushu eyimfihlo i-Ubayu eshushu.
Umbuki zindwendwe ngu- 御宿飯坂
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ御宿飯坂は､福島市飯坂町にある民家を利用した小さなｹﾞｽﾄﾊｳｽです。 豪華な施設があるわけでも､おしゃれな古民家でもなく特色はありませんが､気軽に｢ぶらり｣と立ち寄れる何気ない場所に､交流の場となるように肩ひじを張らずやっていきたいと思います。 なので､福島に来た！､近くまで来た！で､お気軽にお立ち寄りください！！
Inombolo yomthetho: M070017971
Iilwimi: English, Bahasa Indonesia, 日本語, Melayu